Yintoni efundwa ngaba babhali bethu bathathu | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali
UJavier Sierra, uDomingo Villar kunye noFrancisco Narla
Okokuqala, nika i I gracias kwaba babhali bathathu babalulekileyo ngeempendulo zakho zobubele kwi-Twitter malunga neencwadi abazifundayo. UJavier Sierra, uDomingo Villar kunye noFrancisco Narla Baphendule kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo xa, enkosi kwi-retweet kaFrancisco Narla osuka Inqaku le-Poe, i ibanjiwe hlala kwinethiwekhi yoluntu.
UFrancisco Narla ungomnye wababhali bembali yam endiyithandayo, ke ndaye ndawuthatha lo mzuzu. Ndibuze ugxa wakhe waseGalician uDomingo Villar, igama abamnyama ilizwe apho ndibonisa ukuzinikela okukhulu. Okokugqibela, kuphendulwe uJavier Sierra, ongomnye wabalamli bethu, ozala kakhulu kwaye olandelweyo ebaleni. Ndenze uphando ngakumbi kwaye babengabokuqala ukuphendula. Olu lufundo lwakho.
1 UFrancisco Narla
2 IDomingo Villar
3 UJavier Sierra
Ukufundwa nguFrancisco Narla
A UFrancisco Narla (Lugo, 1978) akuyomfuneko ukuyibonisa. Umbhali odumileyo othengisa kakhulu njengo Haunting Ibhokisi emnyama okanye inoveli yembali efana URonin, Uqinisekisa okanye okokugqibela kwaye kunconywe kakhulu Apho iinduli ziyabhomboloza. Wayenobubele ngokwaneleyo ukuba aphinde abhale inqaku lePoe esele likhankanyiwe. Emva kwexesha, nasemva kokumbulela, ndakwazi ukugcina i utshintshiselwano olufutshane lweetweets kunye naye kwaye ndathatha ithuba lokumbuza malunga nokufundwa kwakhe.
Iimpendulo Zakho: Kuqala Amaxwebhu amaninzi yenoveli oyibhalayo. Bendingazimiselanga kungabinangqondo ngayo, kodwa masithembe ukuba yenye yencwadi elungileyo. Nangona kunjalo, wayandisa impendulo yakhe ngokukhomba kukuphinda afunde Ungqingo (UArturo Pérez-Reverte), osalindileyo yakutshanje evela kuStephen King kwaye bendifuna ukuphinda ndifunde iPoe kumsitho wokuzalwa kwakhe.
De Ungqingo Ngokuqinisekileyo abalandeli abaninzi bakaPérez-Reverte basenokuthetha okuninzi. Ngokukodwa Ayisosihloko sam sikhunjulwa kakhulu ngutitshala waseCagagagena. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye njengesiqhelo kuye, yenye yesampulu yolwazi lwakhe olukhulu ngeMbali kunye neziqendu zalo ezingakumbi.
Kwaye zikaKumkani nezakhe Ukuvuselela Kuyacaca ukuba abalandeli beGreat American North ye-genre eyoyikisayo banayo ngaphezulu kokurekhodwa nokufundwayo.
Iincwadi zikaDomingo Villar
IDomingo Villar, UVigo ukusukela ngo-1971, ngoyena menzi wento endiyithandayo nendiyithandayo umhloli uLeo Caldas. Uhlala eMadrid kwaye iincwadi zakhe, kunye nabaphumelele amabhaso aliqela ohlobo, aguqulelwe kwiilwimi ezininzi. Ndilinde isihloko sesithathu kuthotho loMhloli uCaldas, ndiyazivumela ukuba ndicebise ezimbini zokuqala: Amehlo amanzi y Ulwandle lwarhaxwa.
Okokugqibela (kwaye kwakhona kwelona laziest xa uchola incwadi) nako kunokuyonwabela Inguqulelo yefilimu ebalaseleyo. Ityikitywe kwiminyaka emibini edlulileyo ngumlawuli UGerardo Herrero. Abadlali abaphambili abanike ubomi obugqibeleleyo kunye nemifanekiso kubalinganiswa boncwadi babenjalo UCarmelo Gómez kunye no-Antonio Garrido, phakathi kwabanye. Kufanelekile ukuba ubone kungekuphela kwimbali, kodwa nokubeka kwisixeko saseVigo kunye neendawo ezikufutshane. Ulonwabo olongezelelekileyo kuthi thina bathanda ngokunzulu ukuya terra galega.
Ilifa waphendula kumbuzo wam obonisa ezi zihloko phakathi kokufunda kwakhe: Umthetho wabantwanangu-Ian McEwan kunye Iminyaka yasendlengu-William Finnegan.
Umbhali uJavier Sierra uhamba nobugcisa.
UJavier Sierra (I-Teruel, ngo-1971) yenye yezona zinto zilandelwa kakhulu, uninzi lwazo kunye nababhali beendaba kwimidlalo. Ingcali kuncwadi apho Imbali ixutywe nemfihlakalo, ngaphezulu kwendalo kunye nokuzonwabisa. Kwaye izihloko zakhe zininzi kwaye ziphumelele. Lakhe impendulo Oko kufunda wayenako esandleni yayileso sihloko: I-Bosco kwi-nude: iminyaka engama-500 yokuphikisana noJheronimus BoschnguHenk Boom.
Akukho nzima ukucinga ukuba iSierra nayo ayihambi khangela ukhuthazo okanye amaxwebhu enoveli yakho elandelayo. IBosco ethi ilandelwe nguHenk Boom iyamangalisa kwaye inempikiswano.
Aba babhali mhlawumbi bakunye ayikokufundwa kuphela abafuna ukukufunda, kodwa kusebenza njengokhuthazo kunye namaxwebhu eencwadana zakhe zekamva. Siza kubona ukuba ngaba kunjalo. Kwaye kwakhona enkosi kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Yintoni efundwa ngababhali bethu abathathu
Iimeko ezi-6 zemihla ngemihla zokufumana inkuthazo